Netizen Report (Tatitry Ny Mpisera Anaty Aterineto): Mitady Vaha-olana Amin’ny Fitsipiky Ny Angon-kevitra Ao Amin’ny Vondrona Eoropeana Ny Kaompanian’ny Teknolojia Amerikana Aty Aorian’ny Tontolon’i Snowden · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2015 1:21 GMT
Mpanao hetsi-panoherana avy amin'ny Antoko Pirate tany Berlin, 2013. Sary avy amin'i Mike Herbst tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Manome topi-maso iraisam-pirenena momba ny fanamby, fandresena, ary fironana mipongatra momba ny zo amin'ny aterineto maneran-tany ny tatitra avy amin'ny mpisera anaty Aterineto.
Mbola tohina ny indostria misahana ny Aterineto Amerikana sy avy amin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny kaopka tampoka tsy nampoizina vao haingana avy amin'ny Fepetra Safe Harbor eo amin'ny Vondrona Eoropeana sy Etazonia, izay nanamora ny famindràna ny angon-drakitra eo amin'i Eoropa sy Etazonia, na teo aza ny fitsipika hentitra kokoa ho an'ny fiainana manokana takiana ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
Tamin'ny fiandohan'ny Oktobra, nofoanan'ny Fitsarana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ilay fifanarahana , maneho ahiahy fanaraha-maso ataon'ny governemanta Amerikana, toy ny hita tamin'ny vaovao nambaran'ireo famborahana nataon'i Snowden, dia nahatonga ny fiarovana rehetra nataon'ireo orinasa Amerikana ho tsy sahaza na tena tsy mifanaraka tanteraka. Manomboka mametraka drafitry ny dika-fiarovana ny orinasa Amerikana, miaraka amin'ny famoronana foiben'ny angon-drakitra vaovao ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny hafa izay mitetika ny hanova ny rafitra any an-tranony.
Nanolotra sosokevitra misy dingana efatra ny Microsoft mba hiatrehana izay antsoin'ny Filohan'ny Raharaha momba ny Lalàna, Brad Smith, hoe ny “kioban'ny fiainana manokan'i Rubik” momba ny fampifandanjàna ny zo hanana fiainana manokana, ny fiarovam-bahoaka sy ny Aterineto maneran-tany. Nanoratra i Smith tao amin'ny lahatsoratra blaogy:
…tsy hateza ny zo hanana fiainana manokana raha miova isaky ny mikisaka muiala toerana iray ho aminà iray hafa ny angon-drakitra. Tsy tokony ho very ny zo fototry ny olona satria hoe miampita sisintany iray fotsiny ny mombamomba azy.
Milaza ilay sosokevitra fa tsy maintsy mifindra miaraka amin'ny angon-drakitra ny zo ara-dalànan'ny olona — noho izany, mitaky fotsiny ny fahazoana torohay avy any Eoropa i Etazonia araka ny lalànan'ny Vondrona Eoropeana. Manolotra hevitra ihany koa izy ireo fa tokony hikatsaka fotsiny ny fidirana amin'ny angon-drakitra amin'ny fangatahana izany amin'ireo orinasa ny governemanta roa tonta, fa tsy hitsikilo na hijirika ny rafitry ny orinasa.
Tsy miresaka ireo olana sarotra mikasika ny zo amin'ny fiainana manokan'ny olona monina any Eoropa nefa mizaka ny zom-pirenena amin'ny firenena hafa ilay sosokevitra. Araka ny fanehoankevitra maro momba ilay fanapahan-kevitra, toa voafetra amin'ny angon-drakitra an'ny “Eoropeana” izany, izay mety midika hoe olom-pirenena na mponina ao amin'ny Vondrona Eoropeana, fa tsy afaka hihitatra any amin'ny olona izay ao amin'ny Vondrona Eoropeana fotsiny fa tsy misy sata ofisialy na inona na inona. Noho ny krizy mitohin'ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny faritra, ny fanontaniana hoe ho an'iza, indrindra, no ampiharina ilay fanapahan-kevitra, no mendrika hojerena bebe kokoa.
Navotsotra ilay Kiobana mpanakanto sady bilaogera rehefa notànana 10 volana an-tranomaizina
Navoaka ny fonja tamin'ny 20 Oktobra rehefa avy nogadraina 10 volana tsy nisy fiampangàna ilay Kiobàna mpanakanto an-dalambe sady bilaogera ara-politika, Danilo Maldonado Machado, fantatry ny maro amin'ny hoe “El Sexto” (“ilay fahenina”). Nampidirina am-ponja izy ny 25 ​​Desambra 2014, raha nanao hosodoko ny anaran'i Raúl sy Fidel Castro teo amin'ny tehezan'ny kisoa roa; nokasainy havotsotra tao amin'ny kianjam-bahoaka tao La Havana izy ireo ho toy ny hetsika mandrehitra amin'ny fanehoankevitra ara-javakanto. Nihevitra azy ho toy ny voafonja noho ny feon'ny fieritreretany, ny Amnesty International, ary nisy fanentanana lehibe ho an'ny #FreeElSexto, nankalaza ny fanafahana ilay mpanakanto ankehitriny, nokarakaraina ho setrin'izany.
Mamoaka ny lisitra maintin'ny Aterineto amin'ny fomba fanao Rosiana i Okraina
Nanambara drafitra ny Minisitry ny Atitany any Okraina mba hanaovana firaketana ny tranonkala voasakana satria nizara “votoaty voarara.” Ho soratana ao anaty firaketana ny tranonkala misy votoaty nojirihana izay mandika ny lalànan'ny zon'ny mpamorona, ny sary vetaveta amin'ny ankizy, ny malware sy ny viriosy, ary ny votoatin'ny fanaovana jono, na dia tsy mazava aza ny fomba hametrahana izany lisitra mainty izany na ho ilaina ny fankatoavan'ny fitsarana mba hanakanana tranonkala iray.
Bahraini iray mpikatroka mafàna fo sy ny reniny miatrika famonjàna noho ny fanompàna ny mpanjaka
Nosazian'ny fitsarana ambony ao Bahrain herintaona an-tranomaizina i Zainab Al-Khawaja noho ny fanompàna ny mpanjakan'ilay firenena manankarena ao amin'ny Golfa ary nampandoavina onitra manodidina ny 8000 USD. I Zainab dia anabavin'ilay Bahraini mpiaro ny zon'olombelona fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Maryam Al-Khawaja, izay mitàna ny andraikitry ny filoha mpisolo toeran'ny Foibe misahana ny Zon'Olombelona ao Bahrain.
Manitsy ny fepetra takiana amin'ny fihazonana angon-drakitra i Alemaina
Nandàny lalàna vaovao amin'ny fihazonana angon-drakitra ny Parlemanta Alemàna ,izay mitaky amin'ireo orinasa misahana aterineto sy fifandraisan-davitra mba hitahiry ny metadata-n'ny mpampiasa azy ireo, anisan'izany ny laharana telefaonina, ny daty sy ny faharetan'ny antso an-telefaonina ary ny hafatra an-tsoratra, ny angon-drakitra ahitàna ny toerana, sy ny adiresy IP—ka hanao azy ireny ho vonona ho an'ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna rehefa misy fanadihadiana momba ny “heloka bevava lehibe” ataon'izy ireo. Toa miaro kokoa ny fiainana manokan'ny Alemàna ilay volavolan-dalàna raha oharina amin'ny lalàna momba fihazonana angon-drakitra tamin'ny 2010 izay nofoanan'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana any Alemaina. Manala ny votoaty mikasika ny fifandraisana, mampihena ny fe-potoana fihazonana enim-bolana ho 10 herinandro, ary mitaky ny angon-drakitra ho voaaro sy voatahiry ao Alemaina io lalàna vaovao io. Tsy maintsy mbola mandalo any amin'ny antenimieran-doholona ilay volavolan-dalàna ary ho soniavin'ny filoha Alemàna alohan'ny hahatonga azy ho lalàna.
Hafanam-po ao amin'ny Aterineto
Ny mpisera amin'ny aterineto manerana izao tontolo izao dia nanamarika ny tsingerintaona voalohany ny fampidirana am-ponja an'i Alaa Abd El Fattah, fanevan'ny revolisiona Ejiptiana izay voasazy dimy taona an-tranomaizina noho izy voalaza fa nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana, “nanafika polisy iray ary nangalatra ny walkie talkie-ny.” Nogadraina isaky ny governemanta tsirairay nifandimby tany Egypta i Abd El Fatta hatramin'ny (ary ao anatin'izany ny) fitondran'i Hosni Mubarak. Nandritra ny andron'ny 27 Oktobra manontolo, mba hanehoana ny fanohanany an'i Alaa, nanova ny “avatars”-ny ho sariny maharikoriko ny mpiara-dia aminy, ary nibitska momba ny raharahany sy ny asany amin'ny maha-mpiaro ny zon'olombelona azy. Ao Kairo, nanao hetsipanoherana teny an-dalambe ny fianakavian'i Alaa, nijoro nanoloana ny Lapam-panjakana tao Ittihadeya ho fanoherana ny fanagadràna azy.
Nitantara ny zavatra niainany tao amin'ny lahatsoratry ny Global Voices ny bilaogeran'ny Zone9 any Etiopia, izay noafahana madiodio tamin'ny fiampangana fampihorohoroana ary navoaka ny fonja tamin'ny herinandro lasa teo (talohan'ny 28 Oktobra) rehefa avy nandalo 18 volana am-ponja. Nanoratra izy ireo:
Manambara bebe kokoa ny tantaran'ny firenenay ny fitànana anay am-ponja. Nahatsapa izahay fa tena lafo vidy ny fahalalahana maneho hevitra. Izahay no vavolombelona mivantana amin'ny tsy rariny. Mihoatra noho ny zava-drehetra, fantatray fa fahavalo voalohan'ny olom-pireneny mpanaja lalàna ny firenena izay manasazy amin'ny tsy rariny.
Naneho ny fisaorana ihany koa ireo blaogera noho ny fanohanana avy amin'ny namany, fianakaviany, fikambanana media, vondrona mpiaro zo, ary ny fiarahamonina izay naneho firaisankina tamin'ny tanjon'izy ireo.
Fanaraha-maso ny Fifandraisana: Olana amin'ny Fanekena ho ara-dàlana sy Filàna ny Mangarahara – Stockholm University
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity ry Ellery Roberts Biddle, Sam Kellogg, Hae-in Lim, James Losey ary Sarah Myers West.